Qunsul Xigeenka Cusub ee Qunsiliyadda Itoobiya Magaalada Los Angeles oo Siwayn Loo Soo Dhaweeyey – Rasaasa News
Qunsul Xigeenka Cusub ee Qunsiliyadda Itoobiya Magaalada Los Angeles oo Siwayn Loo Soo Dhaweeyey
May 25, 2012 Qunsul Xigeenka Cusub ee Qunsiliyadda Itoobiya Magaalada Los Angeles oo Siwayn Loo Soo Dhaweeyey
Los Angels, May 24, 2012 [ras] – Dhallinyarada, Wax-garadka, iyo Dadweynaha Soomaalida Itoobiya ee ku nool Gobolka Kalifoorniya ayaa si weyn u soo dhaweeyey Qunsul Ku-Xigeenka Qunsuliyadda Itoobiya ee Magaalada Los Angeles Mudane Xabiib Muxumad Yusuf. Mudane Xabiib iyo Marwadiisa ayaa xalay fiidkii ka soo degay Garoonka Diyaaradaha Caalamiga ee Magaalada Los Angles, LAX ee Gobolka Kalifoorniya.
Waxaa kale oo Garoonka si diirran ugu soo dhaweeyey shaqaalaha Qunsiliyadda Itoobiya ee Magaalada Los Angeles oo uu hoggaaminayo Qusnulka Mudane Zerihun Retta. Mudane Xabiib oo ah mas’uul Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya aad looga yaqaano loogana jecel yahay. Mudane Xabiib wuxuu ka soo qabtey deegaankeenna xilal kala duwan. Xilkii uu soo qabtey waxaa ka mid ah ahaa Madax Xafiiseedyada Caafimaadka, Dhakhliga, iyo Madax Xafiiseedka Horumarinta Jidadka ee Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya.
Mudane Xabiib Muxumad Yusuf waa Dibloomaasigii ugu horeeyey ee ka soo jeeda Deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Qunsiliyadda Los Angeles loo soo magacaabo.
Haddaba waxaan marnaba la iska indha saabi karin horumarka iyo guulaha wax-ku-oolka ah ee Maamulka Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya uu ka soo hoyiyey Horumarka Arrimaha Gudaha oo ay ka midka yihiin: Caafimaadka, Waxbarashada, Nabbad-gelyada, Dhaqaalaha, Horumarinta Bulshada iyo dhinaca arrimmaha dibadda oo ay magacaabiddan oo ka mid ah.
Bulshada Soomaalida Itoobiya ee ku nool Dalka Mareykanka ayaa aad ugu diirsadey imaanshaha Mudane Xabiib Muxumad Yusuf. Waxayna rajeynayaan in xuquuqdii iyo waxqabadkii ay ku lahaayeen Safaaraddooda ay si habsami ah u heli doonaan haddii Eebbe uu raalli ka noqdo. Waxay kaloo bulshadu rajeyneysaa in xidhiidhka ay la lahaayeen deegaankooda uu sii kordhi doono si ay u maal-gashadaan dalkooda dadkoodana uga saaraanaan gaajada, jahliya iyo dib-u-dhaca ku raagey.
Bulshooyinka kale ee Itoobiya ayaa muddooyinkii gobolkeenu collaadda ku jirey ka faa’iideystey fursadihii maal-gashiga goballadooda oo ay u suurto geliyeen Safaaradaha iyo Qunsiliyadaha Itoobiya ay ku leedahay dacallada adduunka. Waxaan kaloo aan rajeyneynaa in ay hadda oo ay collaaddii soo af-jarantey la inaga rabo inaan is weydiino wixii aan ummaddeena aan u qaban karno innaga oo uga faa’iideysaneyna fursadaha qaalliga ah ee hadda deegaankeena ka jira.
Ugu dambeyntii waxaan gacmo furan ku dhaweyneynaa Mudane Xabiib Muxumad Yusuf iyo Marwadiisa. Waxaan kale oo aan hambalyo u direynaa Madaxweynaha Deegaanka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya Mudane Abdi Maxamuud Cumar guulaha wax-ku-oolka ah ee is-daba-joogga ah ee uu soo hoyiyey.
Abdirisaaq Dahir Budul
Xoghayaha Bulshada Soomaalida Itoobiyo ee Gobolka Kaliforniya
Socdaal Deg deg ah oo Madaxweyne Cabdi ku Tagay Godey iyo Qabridahare
Qaybtii Sideedaaad Sheekadii Xasan Mataan Axmed Xirsi